Dawlada Itobiya oo Markii Ugu Horaysay Sheegtay Abaarta ka Jirta Gabalka Ogaden – Rasaasa News
Dawlada Itobiya oo Markii Ugu Horaysay Sheegtay Abaarta ka Jirta Gabalka Ogaden
Feb 8, 2011 Dawlada Itobiya oo Markii Ugu Horaysay Sheegtay Abaarta ka Jirta Gabalka Ogaden, Eritrea, ethiopia, Ogaden, ogaden peace, ONLF, onlf peace, somalia
Wasiirka beeraha ee Itobiya Mikitu Kassa, ayaa markii ugu horaysay sheegay in dad badan oo ay tiradoodu gaadhayso 2.8 million oo ku nool degaanka Somalida Itobiya [Ogaden], ay abaar xoog leh ku habsatay oo ay u baahan yihiin gargaar cunto oo deg deg ah.
Dawlada ayaa saadaalisay bishii November 2010 in ay hoos u dhaceen soo saarkii midhihii soo go,i lahaa xilgan, waxaan gargaar cunto oo deg deg ah u baahnaan doona 2.3 million oo ruux. Eugene Owusu oo ah isku duba ridaha kaalmooyinka bi,inaadaminimo oo Jamciyada quruumaha ka dhaxaysa u jooga dalka Itobiya, ayaa sheegay in caruur dhan 107,000 ay ku macaluushan yihiin Ogaden, kuwaas oo u baahan doona nafaqooyinka caruurta, kol ay hadal kooban wada jir uga soo saareen Addis Ababa, wasiirka beeraha ee Itobiya Mikitu Kassa.
Abaarta ka jirta degaanka Somalida ayaa waxaa in badan wax ka qoray saxaafada Degaanka Somalida, waxay saxaafaduhu soo bandhigeen abaarta xili hore, nasiib daro maamulka degaanka Somalida, dawlada dhexe ee Itobiya iyo laanta gargaarka ee Jamciyada quruumaha ka dhaxaysa midkoodna waxba kama odhan.
Dawlada Itobiya iyo masuuliyiinta laanta gargaarka Jamciyada Quruumaha ka dhaxaysa u jooga Itobiya, ayaan sheegin abaarta ilaa iyo inta ay ka bilaabanaysay dhimashada dadka iyo duunyadu.
Dalka Somaliya ee la dariska ah degaanka Somalida Itobiya ee aan dawlada lahayn ayey qaylada abaarta iyo gargaarkuba ka bilowdeen bil ka hore, waxaa kol hore gaadhay kaalmadii loo baahnaa.
Waxaase fajac ah in dawlada Itobiya ay xiligan oo ay dad badani gaajo ugu dhinteen qaar ka mid ah gabalada Somalida Itobiya, ay qaylo u dirto aduunka iyada oo codsatay gargaar deg deg ah.
Xukuumada Itobiya ayaa awal hore dhibaato walba oo ka jirta degaanka Somalida ku marmarsan jirtay in ay masuul ka yihiin ururadii hore dagaalka uga waday degaanka Somalida Itobiya, kuwaas oo dhawaan nabad la gaadhay dawlada.
Dhinaca kale, waxaa wax laga xumaado ah in masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida Itobiya, ay tamashlayn u tageen dalalka reer galbeedka iyaga oo joogay bil ku dhawaad, xili ay kumanaan ruux gaajo ugu dhimanayaan degaanka Somalida Itobiya.
Kharajyada xooga leh ee ku baxay safarada masuuliyiinta degaanka Somalida Itobiya iyo kharajyada ku baxay dadka qurbo joogta ah ee u dhashay degaanka oo aan iyagu wax baahi ah u qabin lacagaha lagu bixiyey, ayey isku darkoodu ka badanayaan kharajyada ay dawladu codsatay in gargaarka cunto loo siiyo degaanka Somalida Itobiya.
Degaanka Somalida Itobiya ayaa waxaa uu u baahan yahay isbadal dhab oo wax laggaga qabanayo dhinacyada horumarinta degaanka, taas oo la,aanteed uusan degaanka Somalida Itobiya deganaan helaynin.
Riyale Xaamud, oo ku Biiray Mucaaradka Jabuuti
Jwxo-shiil oo Firimbi u Afuufaya Caws iyo Biyo ku Noosha Kenya